umshini we-paddy irayisi we-huller wokuthena isikhumba selayisi esihle kakhulu
Umshini we-paddy we-huller usetshenziselwa i-paddy irayisi hulling kanye ne-milling.this umshini welayisi we-huller irayisi huller ungaqeda ukuqhaqha, isigayo, ukuhlolwa, ukuqeda, inqubo yokuhlukanisa i-bran futhi wonke.
1.Umshini we-paddy irayisi we-huller onesakhiwo esihle futhi esebenza kahle nokulungiswa.
2.Umshini we-rice hulling wakhelwe ku-faner blowu yokususa isikhumba,ukugcina ukuhlanza irayisi kuhlanzekile.
Imininingwane Yomkhiqizo wePaddy irayisi huller nomshini ohlangene we-peeler
Umshini we-VTNL wochungechunge we-rice huller usebenzisa ubuchwepheshe obuphambili bokugaya obuphambili emhlabeni jikelele, ngokuba ngomunye wemishini esetshenziswa kakhulu yesimanje yokugaya irayisi emhlabeni. Umshini wokulungisa irayisi unokusizakala isikhathi eside, okubandakanya uhlelo lokudlikiza kanye nohlelo lokugaya, umshini we-paddy irayisi wokuqothula ungaqeda ukudonsa, isigayo, ukuhlolwa, ukuqeda, inqubo yokuhlukanisa i-bran futhi wonke, umshini we-paddy irayisi we-huller unezinzuzo zesakhiwo compact, ukusebenza okulula, indawo encane yokuhlala, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, inqubo emfushane yokukhiqiza,ukusebenza kahle kakhulu,yehlisa izindleko zokucubungula okusanhlamvu,
Umshini we-paddy we-hulling umshini wokudonsa uluhlobo oluphelele lokucubungula irayisi elihlanganisiwe. UPaddy wayeyisikrini esinyantisayo, umshini wokuhlukanisa uzibuthe emshinini, irabha roll husker, ukweqa, fafaza umoya wokugaya umoya, ngokuqhubekayo qeda kusuka esigodini ukuze ugaye imishini yokusebenza kwe-net Shelling emhlophe,uhlamvu oluhle, amakhoba, okusanhlamvu okushisiwe, kukhishwe irayisi ngaphandle komshini welilayisi.
Okuzenzakalelayo kwe-paddy irayisi huller ngentengo engcono kakhulu yokuqukethwe kwerayisi okuncane, ephukile irayisi okusanhlamvu okukhanyayo, ubuqotho, ukunemba kokumaka okungaphezu kweyodwa. Umshini wesikhumba welilayisi ungasetshenziselwa futhi ukucubungula ama-oats,irayisi hulling.it ingafinyelela ubumhlophe belayisi ephezulu kanye nezinga eliphansi lokuphuka, Umshini we-paddy irayisi we-huller usetshenziswa emgqeni wokukhiqiza irayisi wokugaya kanye nefektri yokugaya irayisi.
Izici zomshini welayisi we-rice huller
1.Lo mshini we-hulling welayisi kulula ukuwulawula futhi ukuwuhlelela wokugaya ngekhwalithi ephezulu kakhulu nangokucacile irayisi.
2.lo mshini we-huller welayisi unezinga eliphansi lokuphula irayisi, kukhiqizwa ilayisi ephezulu, lokushisa eliphansi elimhlophe elimhlophe.
3.Umshini welayisi owuchungechunge welayisi onamamodeli ahlukahlukene ukufeza isidingo sakho.
4.Umshini we-othomathikhi we-paddy irayisi we-paddy ohlonyelwe ngogesi wamanje kanye nengashisi yokubonisa ingcindezi ukulawula okulula.
5.Umshini osasebenza kakhulu wokuphila paddy irayisi huller ngentengo engcono kakhulu, kulula ukuyigcina isebenza.
Amapharamitha wezobuchwepheshe womshini wokulungisa irayisi
Ividiyo kaPaddy Rice Huller Machine
Sithinte ngomshini wokudonsela ilayisi kaPaddy nomshini ohlangene we-peeler